Yuusuf Garaad oo war kasoo saaray Xilkii uu Madaxweyne Farmaajo u Magacaabay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
By Radio Dalsan Reporter	 On Dec 3, 2020
Iyadoo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareegto ugu magacaabay Danjire Yuusuf-Garaad Cumar in uu noqdo Ergayga Gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa waxaa ka hadlay Yuusuf garaad isagoo u maahdceliyay Madaxweyne Farmaajo, sheegayna in uu si daacadnimo ah karti leh uu xilkiisa u gudan doono .
Yuusu Garaad oo Qoraal soo saaray ayaa sheegay in xili kala guur ah ay kusoo aadday magacaabistiisu, waaxana uu intaas ku daray in khibraddiisa iyo aqoonta uu u leeyahay arrimaha dibadda uu dalka wax ugu qaban doono.
Hoos ka aqrsio Qoraalka uu soo saaray Yuusuf Garaad Cumar
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan uga mahadcelinayaa kalsoonida uu ii muujiyay in uu ii magacaabo Ergeyga Gaarka ah ee Madaxweynaha ee arrimaha Gobolweynaha aan ka tirsan nahay oo bad iyo berriba leh kuna baahsan laba qaaradood.
Waxaan ballanqaadayaa in aan si daacadnimo ah kartideyda, khibraddeyda iyo aqoonteyda oo dhan aan u dul dhigo mas’uuliyadda la ii xilsaaray aniga oo ka amba qaadaya halka la soo gaarsiiyay, lana kaashanaya howlwadeennada iyo hey’adaha Soomaaliyeed ee ay khuseyso.
Xilli doorasho iyo xilli kastaba, Arrimaha waaweyn ee mandiqaddan ka taagan waa kuwo toos u saameeya Dowladnimada, nabadgelyada, dhaqaalaha iyo horumarka dalka iyo dadkeenna Soomaaliyeed.
Saameyntaasi waa mid maanta ah iyo mid istaraatiijiyadeed oo mustaqbalka ah.
Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibbada iyo taageerayaasha tirada badan oo ay ardaydeydu ugu horreyso oo fool-ka-fool, farriin cod ah, mid qoraal ah iyo baraha bulshadaba iigu hambalyeeyay, i dhiirri geliyay, iiguna duceeyay.
Dalka waan wada leennahay, waana in aan u wada adeegnaa. Sabab kasta ha keentee, qofkii aan taasi suurta gal u ahayn ama ka ahayn, ugu yaraan waa in uu dalku ka nabad galaa, sidoo kalena ay ka nabad galaan inta u adeegeysa iyo inta hore ugu soo adeegtay.